Linux 5.10 yatovepo, uye kwatovepo yekutanga vhezheni vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga ndambozvinzwa kubva kuna Antonio Lobato muF1 pane imwe nguva, apo pamberi pekutanga kwemujaho paanoti "chenjera, nekuti kana ukabwaira, unozvipotsa." Izvo zvakaitika kwatiri nekuburitswa kweLinux 5.10, iyo isu takabhenekesa uye tikarasikirwa yekutanga kufadza preview. Uye ndezvekuti, apo pakanga pasina kana maawa makumi maviri nemana mushure mekutanga kweshanduro yakagadzikana, ndiani ari kutarisira kuchengetedza Linux kernel kare yakanga yatanga Linux 5.10.1.
Kazhinji, yekutanga poindi kana yekugadzirisa kugadzirisa inotora mazuva akati kuti asvike, dzimwe nguva padyo nevhiki, asi panguva ino ivo vaifanira kuzviita pamberi sanganisira zvigadziriso zviviri, zvese zvine chekuita nekodhi yekuchengetedza. Matambudziko aive akakura zvakakwana kuti apfuure, saka isu tatova nezvavaizoparidzira seyakagadzirira kugamuchirwa kwevanhu vazhinji.
1 Linux 5.10 LTS inosvika nenhau zhinji dzakakosha
Linux 5.10 LTS inosvika nenhau zhinji dzakakosha
Linux 5.10 ndiyo iyo nyowani LTS vhezheni yeLinux kernel, kuchiita kuburitsa kukuru. Asi zvakare zvakare kuti yakaunza akawanda matsva maficha, ane rakakura runyorwa iwe raune zvakadzama mairi hama yedu blog uye heano mamwe awo nhau dzakatanhamara:
Performance rutsigiro rwe AMD Zen 3 pamwe nemamwe maLinux performance anowedzera.
AMD Zen 3 EDAC kutsigira.
Zvakawanda zvinokurumidza mremap mashandiro pane ARM64 Hardware.
AMD Zen 3 tembiricha yekutsigira sensor.
Pakutanga rutsigiro rweNVIDIA Orin.
RISC-V yekutanga bhuti kuburikidza neEFI.
Tsigira Raspberry Pi VC4.
Kugadziridza kuvhura sosi DRM
Fsync performance optimizations yeBtrfs.
F2FS zvinowedzera zvinosanganisira zera chikumbaridzo chemarara muteresi, tsigiro yekukurumidza faira kudzvinyirira, NVMe ZNS rutsigiro, generic kesi kupeta, uye zvimwe.
Sarudzo "isina kugadzikana" yeOverlayFS kuburitsa mashandiro nekukurumidza asi panowirirana syncs.
Nosymfollow mount sarudzo yakawedzerwa uye yakafanana neBSDs yekuvandudza kuchengetedzeka kwesisitimu.
EXT4 ikozvino inotsigira zvinokasira kuita uye nekukurumidza faira rinonyora kuita muDIO / DAX modes.
Linux 5.10 iri kunze izvozvi, zvakadaro ikozvino chinhu chine musoro chingave chekuisa Linux 5.10.1 izvozvi. Parizvino, kuti umise iwe unofanirwa kuzviita nemaoko, nekuti kugoverwa kweLinux kunotora chinguva kugadzirisa mapakeji. Pane masisitimu akaita seUbuntu, inogona kuiswa ichitoshandisa chishandiso Ubuntu Mainline Kernel Installersezvo inotora software zvakananga kubva kuLinux Archive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.10 LTS iri pano, inounza nhau dzakakosha uye kugadzirisa kugadzirisa kwave kuwanikwa